တက္ကသိုလ်အတုများကို နှိမ်နင်းမည်ဟု ဘယ်လ်ဂျီယံ ကြုံးဝါး - Yangon Media Group
တက္ကသိုလ်အတုများကို နှိမ်နင်းမည်ဟု ဘယ်လ်ဂျီယံ ကြုံးဝါး
ဘရပ်ဆဲလ်၊ ဇွန် ၁၃ ၊ နိုင်ငံတစ်ဝန်းတွင် အတုအ ယောင်တက္ကသိုလ်များပေါများနေမှု ကိုတိုက်ဖျက်ရန်ရည်ရွယ်သည့် အ မိန့်ဒီကရီတစ်ခုကို ဘယ်လ်ဂျီယံ အစိုးရက ထုတ်ပြန်လိုက်ကြောင်း ဇွန် ၁၃ ရက်ဆင်ဟွာသတင်းက ဆိုသည်။
အတုအယောင် တက္ကသိုလ် ဆိုသည်မှာ တရားဝင်တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်တစ်ခုခု၏ အမည်ကိုယူ သုံးကာ တရားမဝင်သောဒီပလိုမာ ဘွဲ့လက်မှတ်များထုတ်ပေးနေသည့် အဖွဲ့အစည်းများကို ဆိုလိုသည်။
ဘယ်လ်ဂျီယံ အဆင်မြင့်ပညာ ရေးကော်မရှင်တစ်ခုသည် အဆိုပါ အတုအယောင်တက္ကသိုလ်များကို နှိမ်နင်းရန် တောင်းဆိုခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် တက္ကသိုလ်အတုအ ယောင်များကို အရေးယူမည့်အမိန့် ဒီကရီကို ပါတီကြီးများ၏ ဒုခေါင်း ဆောင်များက ရေးဆွဲခဲ့ပြီး အစိုးရက အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
တရားဝင်မဟုတ်သော ပညာ ရေးအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့် မိ မိတို့ထုတ်ပေးသော ဒီပလိုမာဘွဲ့ လက်မှတ်သည် ဥပဒေကြောင်းအ ရတရားမဝင်ဟု ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဝန်ခံဖော်ပြရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ”တက္ကသိုလ်”၊ ”အထက်တန်း ကျောင်း”စသည့် ကန့်သတ်စကား လုံးများကို တရားမဝင်သုံးစွဲခွင့်မရှိ ကြောင်း၊ ချိုးဖောက်ပါက ယူရို ၅ဝဝ မှ ၅ဝဝဝ အထိ ဒဏ်ရိုက်ခံရ မည်ဖြစ်ကြောင်း အမိန့်ဒီကရီတွင် ဖော်ပြထားသည်။
အချို့သော သင်တန်းကျောင်း များသည် တရားဝင်မဟုတ်သော် လည်း သင်တန်းသားများကိုသေ သေချာချာလေ့ကျင့်သင်ကြားပေး ကြသည်။ အချို့မှာမူ သေသေချာ ချာသင်ကြားမပေးဘဲ တရားဝင်မ ဟုတ်သောဘွဲ့လက်မှတ်ကို လိမ်လည် ရောင်းချနေကြောင်းဖြစ်သည်။
၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင် ပြုစုခဲ့သော စာရင်းတစ်ခုအရ ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ တွင် အတုအယောင်တက္ကသိုလ် ၄၁ ခုရှိခဲ့ပြီး ၁ဝ ခုမှာ ဝယ်လိုနီယာမြို့ နှင့် ၂၃ ခုမှာ ဘရပ်ဆဲလ်မြို့တို့တွင် ဖြစ်ကြသည်။
မြောက်ကိုရီးယား-အမေရိကန်ထိပ်သီး ဆွေးနွေးပြီးနောက် အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး တောင်ကိ??
ကျိုက်မရော ခရုံဂူကျောက်မိုင်းအနီးတွင် လိုင်းကားတစ်စီး ရေမြောင်းထဲ ထိုးကျတိမ်းမှောက်၊ နှစ?
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်ရန်နိုင် နှစ်(၁ဝဝ)ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အောင်လံမြို့နယ် ကံမလေးကျေးရွာ??
မအူပင်တွင် ငါးကန်သမားချင်း ရန်ဖြစ်ရာမှ နှစ်လောင်းပြိုင် လူသတ်မှုဖြစ်